फुच्चे रुख अर्थात् बोनसाईले दिन्छ बुढेसकालको पेन्शन
सुशीला सापकोटाले पिपलको एउटा विरुवा ४० हजार रुपैयाँमा बेचिन् । जीतबहादुर खड्काले बोगनबेलीको एउटा विरुवा ५२ हजार रुपैयाँमा बेचे ।
सुशीला र जीतबहादुर दुवैजना राजधानीमा फूल नर्सरी चलाउँछन् । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरमा रोजडेल नर्सरी चलाउने प्रकाश राई एउटा विरुवाको १५ देखि २० हजार रुपैयाँमा बेच्छन् ।
हजारौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने यी कस्ता विरुवा हुन् ? यी विरुवा होइनन्, रुख हुन् । गमलाका फूलको बोटभन्दा धेरै सानो हुन्छ यी रुख । अर्थात्, यी हुन् बोनसाई ।
ठूलाठूला रुखका विरुवालाई सानो प्लेटमा नियन्त्रित रुपमा हुर्काएर बनाइन्छ बोनसाई ।
सानो प्लेटमा एउटा विरुवा । आकारले विरुवा देखिए पनि बुढो रुखजस्तो देखिन्छ । र, रुखको उमेर– दशौं वर्ष । यी बाउन्ने रुखलाई भनिन्छ बोनसाई ।
दुई हजार वर्ष अघि नै चीनमा ससाना ल्याडस्केप गार्डेन (बगैँचा) बनाइएको इतिहास छ । एउटा कोठा आकारको तथा त्योभन्दा सानो बगैंचा ल्याण्डस्केप गार्डेन बनाउन रुखविरुवा पनि सानै हुनुपर्यो । त्यसपछि सुरु भयो बोनसाई बनाउने चलन ।
तर, नेपालमा भने बोनसाई बनाउने चलन पौराणिक कालबाटै बोनसाई सुरु भएको मान्न सकिन्छ । गमलामा ‘बर–पीपल’ रोपेर त्यसको आकार नियन्त्रित गरेर सानै रुपमा राखिरहने चलन धेरै पूराना हो ।
तर, आधुनिक बोनसाई बनाउने विधिप्रविधि विकासको श्रेय जापानलाई जान्छ । जापानबाटै बोनसाई प्रविधि विश्वभरी फैलिएको मानिन्छ ।
ठूला रुखका विरुवालाई सानो रुपमा बुढो रुख जस्तै बनाएर राखिनु नै बोनसाईको विशेषता हो ।
खासगरी अमिलो प्रजातिका फलफूल तथा वर र पिपलका बोनसाई आकर्षक देखिन्छ ।
सल्ला प्रजातिका रुखको बोनसाई पनि आकर्षक हुन्छ । बोगनबेली फूलको बोनसाई पनि आकर्षक हुन्छ । बगनबेलीको बोनसाई फूल्दा असाध्यै सुन्दर देखिन्छ ।
एकै शब्दमा भन्न पर्दा बाउन्ने या पुड्को रुख नै बोनसाई हो ।
काठमाडौंका फूल नर्सरीहरुले अहिले बोनसाईलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका छन् । किनभने माग बढिरहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म बोनसाईको यति धेरै माग थिएन । अहिले माग बढेपछि चीनबाट समेत आयात गरिन थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
वृक्षको विरुवालाई नियन्त्रित रुपमा हुर्काउनुपर्ने भएकाले बोनसाई तयार पार्न धैर्य र सीप चाहिन्छ । पानी कति हाल्ने, मल कति हाल्ने, घाममा कति राख्ने अनि छायाँमा कति राख्ने भन्ने ज्ञान पढेर पनि लिन सकिन्छ, तर, अनुभव नै बोनसाईका लागि मुख्य कुरा हो ।
बोनसाई तयार पार्दा विरुवालाई बढ्न दिइँदैन । उचाई बढ्न नदिँदैमा बोनसाई तयार हुँदैन । आकारमा सानो भए पनि त्यो ठूलो रुखको स्वरुपको देखिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न किसिमका तारले बाँधेर त्यसका हाँगाविगालाई कतातिर बढाउने भनेर नियन्त्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात्, आफूले सानो प्लेटमा रोपेको विरुवा पाँचसात वर्षमा दुरुस्तै रुख बन्नुपर्छ । तब बन्छ आकर्षक बोनसाई ।
प्रकाश राईका अनुसार राजधानीमा बोनसाईको माग अत्याधिक छ । उनले दुई दशकदेखि बोनसाई बनाइरहेका छन् । उनका अनुसार विदेशबाट आयातित भन्दा स्वदेशी बोनसाई नै पारखी ग्राहकको पहिलो रोजाई भएको छ ।
सुशीला भन्छिन् –‘मैले चालीस हजार रुपैयाँमा बेचेको पिपलको बोनसाई १० वर्षको थियो ।’
ललितपुरको सातदोबाटोका दिनेश राईले स्वामी, पिपल, एजेलिया, बोगनबेलीको बोनसाई घरमा राखेका छन् । स्वामीको बोनसाई उनले ३५ हजार रुपैयाँमा पाँच वर्ष अघि किनेका हुन् ।
जति पूरानो भयो उत्ति नै मूल्यवान र महंगो हुन्छ बोनसाई ।
केहीबर्ष अघि जापानमा भएको अन्तराष्ट्रिय बोनसाई सम्मेलनमा राखिएको एउटा बोनसाईको मूल्य १.३ मिलियन डलर अर्थात् करिब एक करोड तीस लाख रुपैयाँ राखिएको थियो ।
विश्वमा आठसय बर्ष भन्दा धरै उमेरका बोनसाई छन् । जापानमा सात पुस्ताले स्याहारेको चारसय बर्ष पुरानो बोनसाई पनि छ ।
नेपालमा पनि बेलाबेलामा बोनसाई प्रदर्शनी हुन थालेको छ । फ्लोरीकल्चर एशोसियसन नेपाल(फ्यान)का अनुसार नेपालमा पनि बोनसाईको व्यापार बढ्न थालेको छ । एउटा बोनसाई एक लाख रुपैयाँ सम्ममा विक्री भएको छ ।
फूल व्यवसायीहरुले अहिले बोनसाईमा राम्रै लगानी गरिरहेका छन् । एउटा बोनसाई तयार हुन वर्षाैैं लाग्छ तैपनि बनाउँछन् । किन ? व्यवसायीहरु भन्छन्– बोनसाईले हामीलाई बुढेसकालमा पेन्शन दिन्छ । अर्थात्, अहिले मेहेनत गरेर बोनसाई तयार गर्दै भयो भने बुढेसकालमा महंगो मूल्यमा बेच्न सकिन्छ । हाम्रो कथा अनलाइनबाट
प्रकाशित १७ चैत्र २0७४ , शनिबार | 2018-03-31 09:02:20